Siyaasa duubatti hafaa keessaa bahuu qabna-obbo Addisuu Araggaa – Fana Broadcasting Corporate
Siyaasa duubatti hafaa keessaa bahuu qabna-obbo Addisuu Araggaa
Finfinnee, Mudde 17,2011(FBC)-Siyaasa duubatti hafaa keessaa baanee ammayya’aatti ce’uu qabna jedhan Itti Gaafatamaan Siyaasa fi Ijaarsa Badiyyaa Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Addisuu Araggaa.
Obbo Addisuu Araggaa ibsa har’a dhimma yeroo irratti miidiyaalef kennaniin,siyaasa kanaan dura biyya kana keessatti gaggeeffamaa tureen,ummata Oromoo irra dararaan garaa garaa gahaa turee jira jedhan.
Ummatni Oromoo daraaraa bara dheeraf isarra gahaa ture kana yeroo dhumaaf ofirraa kutee darbuuf qabsoo taasiseen har’a ifti mul’achuu obbo Addisuun eeraniiru.
Akka dhaabattis haaromsa gadii fagoo taasifameen waadaa galame bu’uura godhachuun hojiin dirree siyaasaa bal’isuu,hidhamtoota hiikuufi olaantummaa seeraa kabachiisuu bal’inaan raawwatamanii jiru jedhan.
Dhaabbilee dimokiraasii cimsuuf hojiin eegalame jajjabeessa ta’uus kaasaniiru.
Dirree siyaasaa bal’isuu keessatti paartilee qabsoo hidhannoon ala turan gara biyyatti akka deebi’aniif walii galtee taasifameen biyya keessatti haalli mijataa waan umaameef karaa nagaan qofa akka qabsaa’an ta’uu obbo Addisuun ibsaniiru.
Bu’uuruma walii galtee kanaan ABO’s ta’ee dhaabbileen siyaasa biroo biyyattii deebi’aniiru jedhan.
Dhimma hidhattootan wal qabatus qaamni hidhatee biyya alaatii galee fi biyya keessa jiru kaampitti deebi’uun leenjii erga fudhatee booda haaluma fedhii fi dandeetti isaatin kan bobbaafamu ta’uu walii galamee ture jedhaniiru.
Obbo Addisuun Kanaan alatti walii galtee ummata dhokfame akka hin jirre himaniiru.
Haa ta’u malee raawwii isaa irratti gufuun muudachuu eerun,ODP’n leenjii kana kennnuuf qophii xumurus, ABO’n yeroo jedhame keessatti waraana isaa kaampitti deebisuu akka hin dandeenye obbo Addisuun ibsa isaanitiin himaniiru.
Faallaa kanaan loltootni addichaa hoggansa mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu,saamicha raawwachuu,caasaa sadarkaa gadii jiru diiguufi meeshaa waraanaa milishaa irraa hiikkachuu irratti bobba’uu obbo Addisuun ibsaniiru.
Rakkoon kun hundi yeroo muudatu miidhaa dhufuu danda’u ilaalcha keessa galchuun ODP’n obsaa fi tasgabbii olaanan dhimma kana ilaalaa turee jira jedhan.
Ka’umsi rakkoo kana hundaa wanti waltajjiin dhaabbileen lamaan mari’atan hojiitti hiikkamuu dhabuufi ibsi miidiyaaleen kennamu gama ABO’n rakkoo qabaachuu obbo Addisuun himaniiru.
Ajandaan siyaasaa Oromoo wal waraanchisu kan jirre ta’uu kan ibsan obbo Addisuun,Jaarimiyaalen siyaasaa kamiiyyuu qabsoo yaadaan qofa filannoo dimokiraatawaa gaggeessuf of qopheessuu akka qaban dhaamaniiru.
Sadarkaa addunyaatti hojjettoota ekisteenshinii fayyaatif beekamtiin kenname
Jilli naannoo Afaar simatame
Daa’imman Afrikaa beelan miidhaman baraaruuf hojjetamuu qaba- preezdaant…
Ijaarsa seeran alaa magaalaa Finfinneerratti tarkaanfin fudhatamuufi
Oromiyaan sirreeffamtoota seeraa 7,029f dhiifama godhe
Jilli Ityoophiyaa, obbo Dammaqaa Makoonnaniin duurfamu…
Obbo Gadduun diippiloomaatota waliin sagantaa walhaabarruu…
Oromiyaatti lafa qonnaa invastimantiidhan kenname heektaara…